I-china 2835 50cm36led (sshape) abavelisi kunye nabathengisi | Huayuemei
Ukucaciswa 500 * 4.5 * 0.2mm
I-LED yangaphakathi 36PCS
Amandla 5.76w / iiPC
1. Uphawu lwe-Borad ye-LED
Umaleko ophindwe kabini webhodi yesekethe ye-FPC yesekethe, ukuqhuba kakuhle, ukuhambisa ubushushu, ukusasaza ngokukhawuleza kobushushu, ubomi obude.ukuqina okungcono kunobhedu bendabuko be-electrolytic, akukho lula ukuyaphula, ukuphucula ubomi benkonzo.
2. Ukuguquguquka okungcono, kufanelekile kwiibhokisi zokukhanya ezinobunkunkqele kunye neebhokisi ezikhanyayo ezimile okhethekileyo.
3. URa> 90 unokwenza ubungakanani obufunayo ngokweemfuno zakho.
Isiphelo se-4-isiphelo se-LED, umthombo wokukhanya weeyure ezingama-50000, uzinzile kwaye awukhanyisi, umbala othambileyo, ukhuseleko lwamehlo lusempilweni ngakumbi, ubushushu obunemibala emininzi onokuyikhetha.
5. Izinto eziluncedo kuthi
Sinako ngokwe reqest yakho ngokwezifiso.
Singayamkela i-OEM kunye ne-ODM.
Nika umgangatho ophezulu kunye neenkonzo ezilungileyo emva kokuthengisa.
Sineqela lethu le-R & D.
Ifaka isicelo sokuthengisa ibhokisi encinci kunye ne-Plate Guide ye-LED, yenza isicelo sevenkile yetyathanga, ihotele, iivenkile ezinkulu, indlela engaphantsi, isikhululo seenqwelomoya, isikhululo njl.
Egqithileyo Ikhefu leRGB leDynamic ye-LED Strip
Okulandelayo: Umbala ophindwe kabini okhanyayo okhanyise ukukhanya kunye ne-3m ngasemva